Farmaajo oo boobka doorashada ku daboolaya qaraxyada Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo boobka doorashada ku daboolaya qaraxyada Muqdisho
Mucaaradka, waxa ay maanta muujiyeen cabsho xooggan waxa ay ku dhawaaqeeyn in ay dhidiaa u taagi doonaan dhismaha Dowlad cusub, hadiii xaalka doorashadu sidaan ku sii socdo.
MUQDISHo, Soomaaliya – Tan iyo billowgii doorashada baarlamaanka 11-aad ee JFS, waxaa faraha ka baxay amniga dalka, gaar ahaan midka Caasimadda, waxaana joogto noqday dilalka iyo qaraxyada abaabulan oo lagu leynayo shacabka iyo shaqsiyaadka indhaha u ah bulshada.
Ku dhawaad 10 qarax ayay Muqdisho marti galisay 25-kii maalin ee la soo dhaafay, waxaana u dheer dilalka gaar ah, dhaca joogtada ah iyo cabsi galinta lagu hayo bulshada caasimadda.
Qubarada amniga ayaa sheegaya in falalkaan is daba jooga ay salka ku hayaan boobka doorashada, oo Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay doonayaan in ay dhaca kuraasta Golaha shacabka ku qariyaan dhiigga ku daadanaya Muqdisho.
Ku dhawaad shanti sano ee la soo dhaafay, Kooxda waqtigu ka dhamaaday ayaa joogteysay in dhacdo kasta oo hadal heyn dhalisa ay ku damiyaan dhacdo kale, waxayna hore isugu aaddiyeen dhowr dhacdo oo mahartooyin murugo leh reebay.
Kooxda Al-Shabaab , ayaa sheegatay qaraxyada oo dhan, waxaase la rumeysan yahay in ay fududeeyaan saraakiil ka amar qaata Fahad iyo Farmaajo oo ku tirsan qeybaha kala duwan ee ciidamada dalka.
Doorashada kuraasta Golaha shacabka, ayaa ku billaabatay, boob ay gar-wadeyn ka yihiin Madaxda Maamullada, waxaana is-qabsatay qeylo-dhaan xooggan oo ka imaaneysa odayaasha dhaqanka iyo Musharixiinta.
Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Xil-gaarsinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa indhaha ka daawanaya saxmadda siyaasadeed ee aloosan, wuxuu eegayaa amni-darrada Muqdisho ee sii kordheysa.